China Radio Shuttle umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
1 Automatic single inbound Ukwamkela umyalelo ongenayo, i-shuttle iphakamisa iimpahla ekupheleni kwangaphakathi kwaye ibeke kwindawo engenanto emva koko ibuye.
2 Okuzenzekelayo okuphumayo okukodwa Emva kokwamkela imiyalelo ephumayo, isiphekepheke sithatha ipalethi egciniweyo kwilayini isiwe ngaphandle okanye isishukumisi.
3 Inbound eqhubekayo kunye
ngaphandle Ngomsebenzi oqhubekayo ongenayo kunye nophumayo kwibhetshi, inani eliza kusetyenziswa linokusetwa kulawulo olukude, ifowuni ephathwayo okanye
I-PC yeCwecwe (ukhetho) ngexesha elinye, kwaye ngokuqhubekayo & ngaphandle komsebenzi unokuphunyezwa ngonqakrazo olunye.
4 Guqula ngokuzenzekela kwicala le-A/B I-Shuttle inokukhetha iimpahla kumacala omabini endlela, akukho mfuneko yokuhlengahlengisa ukuqhelaniswa.
5 Ukuhambelana kwePallet I-Shuttle inokuhambelana neepallets kwimodeli eyahlukeneyo, nceda usethe kwangaphambili ngaphambi kokuba usebenze ekungeneni kwendlela.
6 Imowudi yokulinganisa I-Shuttle iyawamkela umyalelo, ngokuzenzekelayo ithwala iipalethi ngendlela enye enye ukuya ekupheleni kunye nokuhlelwa.
7 Imowudi yokubala Bala inani lendlela ngokuzenzekelayo's ipallet, kwaye ubale ngokuzenzekelayo iipalethi ezipheleleyo zangaphakathi neziphumayo.
8 Ulawulo lwamandla -Ulawulo lwenqanaba le-Multi-level threshold power threshold, libuyela emva ukuqala indawo emva komsebenzi wangoku kunye nokukhuthaza ukutshintshwa ukuba ibhetri iphantsi.
- Kwiimeko ezithile, i-shuttle inokuhlawuliswa ngaphandle komgca ngokukhawuleza.
-Ukuzigweba kunye nokuzitshaja emgceni (kuphela ngokusebenza ngokuzenzekelayo)
9 Ulawulo olukude lweenjongo ezininzi Iishuttles ezininzi zinokuqhutywa sisilawuli kude esinye.
10 Khangela i-shuttle Cinezela iqhosha elinye kwisilawuli kude ukukhangela i-shuttle kwaye uqhutywa sisandi kunye nokukhanya.
11 Khumbula ngesandla Khumbula kwisikhundla sokuqala ngesandla, ngokulawula kude, ifowuni ephathwayo okanye iPC yeCwecwe (ukhetho), umyalelo wenkqubo
12 Ukusebenza kwentliziyo Nxibelelana ngokubamba inkqubo yolawulo lwekhompyuter ngexesha lokwenyani ngokujonga ukubetha kwentliziyo ukuvavanya ubume be-intanethi (kuphela i-automation epheleleyo).
13 Ukuyeka ngokuNgxamisekileyo Uphawu olungxamisekileyo luthunyelwe ukude ngexesha likaxakeka, kwaye i-shuttle iyama ngoko nangoko de kunyuswe imeko kaxakeka.
14 Umsebenzi okude Iyakwazi ukuhlaziya kunye nokukhuphela inkqubo ukude (Kwi-Wi-Fi Network).
15 esweni inkqubo Idatha yenkqubo yokubeka iliso ngexesha langempela, kunye nokuphakamisa i-alamu kwisandi kunye nokukhanya kwimeko engaqhelekanga.
Xa kuthelekiswa ne-drive-in racking, isakhiwo sizinzile ngakumbi.Isebenza ngokulawulwa kude okanye i-WCS, akukho mfuneko yokuqhubela kwi-rack kunye nokunciphisa ukungqubana kwe-racking.Phucula imveliso yokhuseleko ngelixa uvumela ukugcinwa ngokukhawuleza kunye nokuchaneka ngakumbi kwempahla.
◆Ukuphucula ukusebenza kakuhle kakhulu
Ukusebenza kakuhle okuphezulu, ukuhlela okuzenzekelayo, uluhlu lwempahla.Imowudi yokusebenza eguquguqukayo, imo yokufikelela kwimpahla inokuba yiFIFO okanye iFILO, ecutha kakhulu ixesha lokulinda ukusebenza.
◆Ukusetyenziswa kwendawo ephezulu
I-aisle ye-Forklift iyancitshiswa xa ithelekiswa nezinye iintlobo zeeracks, uyilo olukhethekileyo lunokufikelela kwindawo yokugcina yoxinano.
1.Beka i-shuttle kumzila kaloliwe.
2. Cofa iqhosha elingaphakathi lolawulo olukude.
3.I-Shuttle iphakamisa i-pallet, ihambela kwi-.yeyona ndawo inzulu, ibeka phantsi ipallet.
4.Shuttle umva ukuya ngaphambili ukuze ufumane umsebenzi omtsha.
I-Shuttle yenza imisebenzi efanayo ngokulandelelana komva.
Indawo yokugcina impahla Ubude____mm ​​x Ububanzi____mm ​​x Ubude obucacileyo___mm
Indawo yocango lweWarehouse yokulayisha kunye nokothula iimpahla
Ubude bePalethi____mm ​​x Ububanzi____mm ​​x Ubude___mm ​​x Ubunzima_____kg.
I-Forklift yobubanzi obuncinci be-asiles_____;Ubude bokunyusa ubude _____
Ukusebenza kwangaphakathi nokuphumayo: Ubungakanani beePalethi ngeyure_____.
I-Shuttle iya kuvavanywa ngaphambi kokuhanjiswa.Injineli inokuvavanya i-shuttle kwisiza okanye kwi-intanethi.
Iwaranti yonyaka omnye.Ukuphendula ngokukhawuleza kwiiyure ezingama-24 kumthengi waphesheya.Okokuqala vavanya kwi-intanethi kwaye ulungelelanise, ukuba ayikwazanga kulungiswa kwi-intanethi, injineli iya kuhamba kwaye isombulule iingxaki kwisiza.Iinxalenye zasimahla ezisecaleni ziya kunikezelwa ngexesha lewaranti.
Ngaphambili: IiShuttle ezininzi
Okulandelayo: I-Shuttle Mover
Umhambisi, ICarton Live, I-Four Way Shuttle, Asrs Ugcino, Qhuba kwi Racking, IShuttle yomntwana,